Qeybtii 2-aad. Halkan ka aqriso qeybta 1-aad. Bishii Saddexaad 21 keedii 2012: Sarkaalka booliiska ahaa waxa uu Cali u soo jeediyey fikir ah in heshiis ay kala saxeexdaan labadoodu; heshiiskaas oo ah wakaalasho uu Cali u ogolaanayo AK in uu wakiil uga noqdo buuggiisa, sii uu awood sharci ugu yeesho dhammaystirka heshiiska daabacadda buugga ee shirkadda la’ la gelayo.
31kii Bishii Shanaad ee 2013 ka, ayaa sarkaalkii dharcadda ahaa iyo Cali ay degeen kuna kulmeen huteelka raaxada ee Hilton. Booliiska Kanada ayaa bixiyey kharashka ku baxay safarka Cali, oo ay ku jiraan tigidhka diyaaradda, kharashaadka kale ee safarka iyo hudheelka oo aad qaali u ahaa. Sarkaalka oo markii dambe ee Cali maxkamadda la geeyey, maragga ku furay, ayaa marka uu ka sheekaynayey kulankaas ugu horreeyey ee ay ku yeesheen Mauritius, waxa uu sheegay in Cali aad ugu farxay kulankaas, “Waa uu dhoolla caddaynayey, markii aanu kulannay waa uu igu dhegey oo aanu hab isa siinnay” ayaa uu yidhi, isaga oo intaas ku sii daray, “Aad iyo aad ayaa uu ugu faraxsanaa in uu i arko”
Qareenka difaacaya Cali ayaa sheegay in booliiska Kanada uu habkaas u raacay fashilinta dembiilenimada Cali. “Waxa ay sameeyeen basaas Cali u sheegtay in uu leeyahay shirkad buugaagta daabacda.” Ayaa uu yidhi qareenku.
9kii Bishii lixaad, 2015: Ayaa ugu dambayntii Cali la keenay Kanada, waxa uu ka soo degey garoonka diyaaradaha ee tuulaha Halifax, kaddib diyaarad gaar ah ayaa toos loogu qaaday illaa magaalada Ottawa ee caasimadda Kanada.
Intaas oo keliya Cali lagalama hadlin, ee waxa uu sarkaalka booliiska dharcadda ah ee ‘Chris’ kala sheekaystay suurtagalnimada in mustaqbalka ay galaan heshiisyo buugaag kale uu qorayo Cali iyo weliba in filim dhukumanteri ah ay ka sameeyaan qisada afduubkuu Amanda Lindhout. La soco qeybta saddexaad Insha Allah…